စွယ်တော်ပုံရိပ်ကို သိန်းချီလှူဒါန်း ~ Myanmar Express
2 December 2011 04:46
ပညာရေးဖွံဖြိုးဖို့ နှစ်ရက်အတွင်း မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ပတ် အတွင်း သိန်းချီ လှူကြရင် ကောင်းမှာပဲ။
မယောင်ရာဆီလူး..ဖူးချင်ရင်..တကယ့်စွယ်တော်အစစ်ကို သွားဖူးကြပါလား..တန်ခိုးပြတာတို့..အယောင်အ၀ါပြတာတွေကို ဘုရားက သိပ်ပြီးနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူး..ရေခွက်မှာပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲ..အဲလောက်သဲသဲလှုပ်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး.ပြောပြန်ရင်လည်း သူများ သဒ္ဓါကို ပိတ်ပင်တယ်ဖြစ်အုံးမယ်..ဘုရားသာ သက်တော်ထင်ရှားရှိခဲ့အုံးမယ်ဆိုရင်လေ..ဒီလိုတွေလုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီး..မင်းတို့ကွာ..ငါအတန်တန်ဆုံးမခဲ့..ဟောခဲ့ပြောခဲ့တာတွေကို.မှ မထောက်ထားဘူး..မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်နေကြတယ်..မိုက်လိုက်ကြတာလို့...ပြောမလားမသိဘူး...
2 December 2011 11:50
သာဓု သာဓု သာဓုမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ သဒါတရားက နိုင်ငံတကာ လေးစားလောက်ပါပေတယ်နတ်လူသာဓု ခေါ်ကြပါကုန်
အဲ ဒီ သဒ္ဒါတရား ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးပါ။ မစ္ဇိမ ပဋိပဍာ (စာလုံးပေါင်း မှားနိုင်ပါသည်)ကို ကျွန်တော်တို့ ဘုရားက အဓိက ထားပါတယ်။ ဘယ်အရာကို မဆို လွန်လွန်ကျူးကျူးလုပ်တာ မကောင်းပါဘူး။ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ပိုက်ဆံတွေကို နှမျှောလိုက်တာ။ ပိုက်ဆံမရှိလို့ စာမသင်ရတဲ့ ကလေးလေးတွေ နွမ်းပါးပြီး တကယ်တရားအလုပ် လုပ်နေတဲ့ ရဟန်းတော်တွေကို လှူလိုက်ရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲဗျာ။
အပေါ်က ကောင်လေးမင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမူးရစ်၊ ပျော်ပါး သောက်စား တဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ်အဲဒီလူတွေ အကုန်လုံးကို နှမျှောလိုက်တာ ကလေးတွေ စာသင်ဖို့ လှူသင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါ(ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါ)မင်းကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်ဖိုးကုန်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို နှမျှောပြီး အဲဒီကလေးတွေကို လှူသင့်တယ်ဆိုတာ လည်း သတိရပါဘုရားကို လှူတဲ့ ပိုက်ဆံဆိုတာ နှမျှောစရာမဟုတ်ဘူးမင်းအတွက် ငါရင်လေးတယ်ကွာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲလမ်းကြောင်းတွင် လက်တွဲပါ...
ဟီလာရီကလင်တန် လာရောက်လည်ပတ်မှုကြောင့် မြန်မာ့တိုးတ...
မြန်မာ ဘလော့ဂါများ အတွက် ဘလော့ လုံခြုံရေးသတိပြုဖွယ...
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ကားကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားထ...
လူ့ပြည်တွင် ကျန်ရှိခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော် ...
မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် ဂျာမနီက ကြေညာ...
ဒီလို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးတေ...
အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးများ ညီလာခံ နေပြည်တော်တွင်...
ဟီလာရီကလင်တန် ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်း ဒေါ်စုဆီ တန်းမ...
နိုင်ငံခြားရောက် လူလိမ်လင်မယား ( ပေးစာ - ၅၈ )
ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရေး ပျက်ဆီးမှု
မြန်မာသတင်းထောက်တွေကို အမေရိကန်က အယုံအကြည် လုံးဝ မ...
ဟီလာရီကလင်တန် ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?
ဗမာ၊ ရခိုင်တွေကို မောင်းထုတ်တဲ့ KIA
လူအင်အား ချိနဲ့ပြီး ရိက္ခာပျက်လပ်နေတဲ့ KIA မှ တပ်သာ...
သတင်းလိမ်မှုများကြောင့် ဘီဘီစီ ကို မလေးရှားနိုင်ငံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြင်မှန်ရကာ ကိုယ်တိုင် ရွေးကော...
နိုင်ငံခြားမှ လူလိမ်တစ်ယောက်အကြောင်း ( ပေးစာ - ၅၆ ...
မြန်မာဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ ညံ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
သံဃာတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြား ရန်တ...
ပြန်တည့်မတ်ဖို့ လွယ်ပါ့မလား NLD
အခြေအနေမကောင်းတော့ ပုံစံပြောင်းရတော့မည် ပြည်ပရောက်...
အတိုက်အခံများ အားကျစရာ ဥာဏ်အကောင်းဆုံး တိရစ္ဆာန်မျာ...
ခုချိန် လူ့ဘဝရတုန်းမှာ ဘုရားရှင်ကို ဖူးခွင့် မရပေမ...
သောက်တော်ရေခွက်တွင် ပေါ်သောပုံရိပ် နှင့် နောက်ဆက်တွ...
တောင်ကြီးမှ ပထမတန်းကျောင်းသူ ၀ါယာကြိုးဖြင့်အရိုက်ခံရမှု အုပ်ထိန်းသူကို တရားစွဲဆို
တောင်ကြီးမြို့မှ အသက်(၇)နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူကို ၀ါယာကြိုးနှင့် ရိုက်မှုဖြင့် အုပ်ထိန်းသူအား လူမှုဝန်ထမ်းမှ တရားစွဲဆို ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယနေ့တ...
မြန်မာနှင့် ထိုင်း အစိုးရချင်း သာမက ပြည်သူ ချင်းပါ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးရန် လိုသလို ပြည်သူ့ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု သည်လည်း အရေးကြီး
[image: မြန်မာနှင့် ထိုင်း အစိုးရချင်း သာမက ပြည်သူ ချင်းပါ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးရန် လိုသလို ပြည်သူ့ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု သည်လည်း အရေးကြီ...
ကမ္ဘာ့မြို့တော်များ (ဆစ်ဒနီ) သြစတြေးလျ
[image: ကမ္ဘာ့မြို့တော်များ (ဆစ်ဒနီ) သြစတြေးလျ] ဆစ်ဒနီမြို့သည် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ နယူးဆောက်ဝေး ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ အများ ဆုံး မြို့တေ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်မှ ၇ ရက်နေ့ အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ World Economice of East Asia ဆွေးနွေးပွဲမှာ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒ...